Zavatra tsy tokony hataonao mandritra ny dia - Victor Mochere
Eo am-pandehanana dia misy zavatra tsy maintsy ialanao araka izay azonao atao. Ny ankamaroan'ny mpandeha dia manimba ny diany amin'ny fanaovana fahadisoana azo ialana fotsiny, angamba tsy fantatra na tsy fantatra. Rehefa mikasa ny dia, dia tsara ny manao fikarohana kely momba ny toerana tianao haleha. Jereo ny fitsipika sy fitsipika sasany voafaritry ny lalànan'ny firenena mba hahazoana antoka fa tsy ho eo amin'ny lafiny ratsy ianao any amin'ny firenena vaovao.
Ireto ny zavatra tsy maintsy ialanao rehefa mandeha.
1. Aza mitondra entana tsy ilaina
2. Aza atao ambanin-javatra ny fiarovana anao
3. Fadio ny fitafy mihantsy
4. Fadio ny manakalo vola eny amin'ny seranam-piaramanidina
5. Fadio ny miresaka zavatra saro-pady
Ny fahadisoana iray ataontsika rehefa mandeha dia ny manombantombana be loatra ny zavatra ilaintsika amin'ny diantsika. Tokony hanana lisitra famonosana mazava sy voalamina tsara ianao mba hanampiana anao hamaritra ireo zavatra fototra ilainao amin'ny dianao. Hanampy izany raha misoroka araka izay azo atao ny tsy manangona zavatra be dia be izay tsy ilainao amin'ny dianao.
Ohatra, raha mikasa ny handany ao amin'ny hotely ianao, dia mety tsy mila mitondra ny lambam-pandrianao raha tsy nilaza ny mifanohitra amin'izany ny hotely. Ho fanampin'izany, ny fametrahana mazava tsara ny entanao dia hiantoka fa tsy mihoatra ny lanja voatondro ianao. Mety ho sahiran-tsaina sy mandreraka ny tsy maintsy misintona sy mitondra kitapo mavesatra, indrindra alohan'ny sy aorian'ny hidiranao amin'ny fitateranao.
Na manao dia lavitra ianao na manao raharaham-barotra, dia tsy tokony ho levona mihitsy ny fiarovana anao. Noho izany, mazotoa amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao mandritra ny dia. Raha sendra valan-javaboary ianao dia araho foana ny toromarika omena ho fiarovana anao. Ny mpandeha sasany dia mampandefitra ny fiarovana azy ireo amin'ny aventure, manimba ny dia iray manontolo. Amin'ny maha-vaovao anao ao an-tanàna, mety te hanandrana saika ny zava-baovao rehetra ianao; mitandrema anefa.
Vakio tsara izay toromarika mifandraika amin'izany mba hahazoana antoka fa azo antoka izay ataonao. Raha tsy azonao ny fiteny ampiasaina dia afaka mangataka mpanampy amin'ny mponina na mpitari-dalana anao foana ianao raha manana izany. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mieritreritra ny hanana kitapo anti-halatra izay hiantoka ny zava-tsarobidy rehetra toy ny fitaovana, ho azo antoka mandritra ny dianao. Ary koa, ny kitapo dia tokony ho tantera-drano mba hiarovana ny zavatra ilainao raha sendra misy fianjerana andrasana.
Ny fandehanana any amin'ny toerana vaovao dia midika fa hifanerasera amin'ny olona tsy mitovy kolontsaina sy finoana ianao. Noho izany, diniho ny akanjonao. Aoka ho mendrika sy maotina ny fitafy. Na dia mpizaha tany aza ianao, dia mety hiteraka fifantohana tsy ilaina raha manao akanjo hafahafa izay mety mifanohitra amin'ny finoana sy ny kolontsain'ny mponina. Mba hahazoana antoka fa mahazo fitokisana avy amin'ny mponina sy ny olona hifaneraseranao ianao, ataovy azo antoka fa mety ny akanjonao.
Ankoatra izany, afaka manao fikarohana kely momba ny kolontsaina amin'ireo toerana kasainao hotsidihina ianao. Hanampy anao hamantatra ny karazana fitondran-tena antenainy haseho anao izany. Noho izany, eo am-pamoriana ny akanjonao dia ataovy izay handinihanao ny fomba fijerin'ny olona ary raha hankasitraka ny bika aman'endriny ianao.
Ny mpandeha sasany dia tsy mahita ny teboka rehefa manakalo vola any amin'ny seranam-piaramanidina. Tsarovy fa rehefa mandeha ianao dia te-hitahiry vola betsaka araka izay azonao atao ary hampitombo azy ireo amin'ny tanjona voalohany amin'ny dia. Mety lafo ny fifanakalozana vola eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny tahan'ny fifanakalozana dia mety ho adala be ao amin'ny seranam-piaramanidina satria mihevitra izy ireo fa mila vola avy hatrany ianao ary noho izany dia tsy maintsy kivy ianao. Fanampin'izay, raha vao sambany ianao ao amin'io firenena io, dia mety tsy ampy fahalalana momba ny toerana tsara indrindra hanaovana ny fifanakalozana vola ianao.
Noho izany, raha te hankafy ny taham-panakalozana tsaratsara kokoa, ataovy azo antoka fa manakalo ny volanao aloha ianao alohan'ny handehananao na miandry mandra-pahatonganao any amin'ny tanàna akaiky indrindra rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao. Ankoatr'izay, mitandrema rehefa manao fifanakalozana, diniho ny fiarovana anao. Azonao atao ny mikaroka foana ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny mba hanampiana anao hamaritra ny vola ilainao amin'ny dianao.
Ny tanjonao amin'ny dia dia tokony hifantoka amin'ny zava-drehetra. Tsy maintsy mifantoka foana ianao ary misoroka ny fidiran'ny olana anatiny ao amin'ny firenena tsidihinao. Aza miditra amin’ny politika ohatra. Tsarovy fa samy manana ny foto-pisainana sy ny fomba fijery ny olona. Noho izany, tokony ho liana amin'ny zavatra resahinao amin'ny olona ifaneraseranao ianao.
Ny lohahevitra mifandraika amin'ny politika dia mety ho mora, ary mety hanimba ny dianao ianao raha tafiditra ao anatin'izany. Faharoa, ialao ny raharaha saro-pady hafa toy ny firazanana, lahy sy vavy, na vondrona vitsy an'isa. Ny toerana sasany dia mandray ireo olana ireo ho zava-dehibe, toy ny politika. Noho izany, ny fandraisanao anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra toy izany dia mety hitarika ho amin'ny fihantsiana tsy ilaina, indrindra raha tsy mitovy hevitra ianao.
Rehefa manomana ny dianao manaraka ianao, dia mila mitandrina amin'ny zavatra mety hanimba ny fihetseham-ponao sy hiteraka fanelingelenana tsy ilaina. Tsy maintsy mankafy ny dianao ianao ary tsy misy adin-tsaina mandritra sy aorian'ny dianao. Mahaiza mamorona sy saro-pady amin'ny fotoana iray ihany.
Sakafo matsiro azonao atao ao an-trano